Momba anay - Shandong Surmount Hats Co., Ltd.
Shandong Surmount Hats Co., Ltd. natsangana tamin'ny 2005 ary miorina ao an-tanàna Rizhao, tanàna amoron-tsiraka tsara tarehy any amin'ny faritanin'i Shandong, Sina. Satria manakaiky ny seranan'i Qingdao sy seranan-tsambon'i Rizhao dia mety tokoa ny fitaterana. Ny orinasanay dia manana mpiasa manodidina ny 300 izay mandrakotra velaran-tany mihoatra ny 13.000 metatra toradroa, misy renivohitra voasoratra anarana 10 tapitrisa sy fananana efa misy mihoatra ny 20 tapitrisa. Ny orinasanay dia manana atrikasa maoderina, fotodrafitrasa fanampiana, fitaovana famokarana mandroso ary hery ara-teknika manankarena.
Ny orinasanay dia mamokatra satroka siny, satroka eny an-tendrombohitra, satroka baseball, satroka sy satroka miaramila, satroka ara-panatanjahantena, satroka lamaody, visor ary satroka dokam-barotra. Ary afaka mandray baiko OEM arakaraka ny fitakian'ny mpanjifa isika. Noho ny endrika vaovao, ny lamaody lamaody, ny asa-tanana mandroso ary ny akora avo lenta, ny vokatray dia malaza be eny an-tsena. Ny ankamaroany dia aondrana any Korea, Japan, Europe ary Etazonia, ary nahazo hevitra tsara avy amin'ny mpampiasa maro.
Izahay dia manizingizina ny teoria ho an'ny orinasa "Andriamanitra dia mpanjifa, ny kalitao no fiainana", mihevitra ny "Surmount Oneself; Mikatsaka Super-Excéliciement" ho toy ny fanahy miompana, miantoka ny kalitaon'ny kilasy voalohany ary mamorona marika kilasy voalohany. Ny fanirian'ireo mpiasa rehetra ao amin'ny orinasanay dia ny hanome fahafaham-po ny mpanjifa.
Manantena mafy ny hanana fiaraha-miasa mandresy miaraka aminao ny orinasa
Tonga mpanamboatra satroka sy mpamatsy
Ny fikatsahana ny hatsarana, ny asan'ny mpisava lalana ary ny fanavaozana, ny fizarana famintinana, ny mpanjifa aloha, ny fiaraha-miasa mandresy.
Ny fahamendrehana, ny fanajana ary ny matihanina dia marina foana ny mpanjifa.
Ny fitsipi-pitondrantena no laharam-pahamehana sy fahavonona hanome. Tia vola, manolo-tena ary miray hina.
Ny valiny dia manjaka, ny antony dia faharoa.
Ataovy matotra ary mahereza.
Ny asa rehetra dia manana drafitra.
Ny drafitra rehetra dia misy valiny.
Tompon'andraikitra ny vokatra rehetra.
Ny andraikitra rehetra dia tsy maintsy dinihina.
Ny fitsirihana rehetra dia misy valisoa sy sazy.
Amin'ny maha mpanamboatra satroka matihanina anay dia nandalo fanamarinana rafitra kalitao ISO9001 izahay，Ny famaritana WRAP sy ny tomban'asa momba ny fahaizan'ny orinasa navoakan'ny Bureau Veritas, izay mpitarika eran'izao tontolo izao amin'ny asa fanombanana sy serivisy fanamarinana.